Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A April 2011 (5)
Q and A April 2011 (5)
1. စိတ်ခံစားလွယ်တယ်၊ Sensitive ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
2. ညှင်းပေါက်တာ ၁၅ နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ
3. ဝမ်းသွားတာ သွေးပါလို့ပါ
4. ဆီးစစ်တံနဲ့ စစ်ပြီးပါပြီ
5. Hirudoid scar cream ကို ဝယ်လိမ်းနေပါတယ်
6. အသက် ၁၄ နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ရာသီ စပြီးလာပါတယ်
7. ကလေးရဲ့ ပန်းတံက သေးပြီး တိုနေတယ်
8. အသားအရည် ခမ်းခြောက်ပြီး ပတ်ကြားအပ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်
Q 1: ကျွန်တော်က (့) မှာ ကျောင်းတက်နေတာပါ။ အသက်က ၂၆ နှစ်၊ အိမ်ထောင် မရှိပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါ။ အရက်၊ ဘီယာ ၂-၃ လမှ တစ်ခါ နည်းနည်းပဲ သောက်ဖြစ်တာပါ။ သွေးပေါင်ချိန် ပျမ်းမျှ ၁၃ဝ၊ ၈၅ လောက်တော့ ရှိပါတယ်။ အရပ် ၅ ပေ ၇ လက်မ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၂၉ ပေါင်။ ဦးခေါင်းနောက်ပိုင်း နားနောက်ဘက်ကနေစပြီး အပေါ်ဘက်ကို လခြမ်း သဏ္ဌာန် အနည်းငယ်ကွေးပြီး အကြောထောင်တက်လေ့ရှိပါတယ်။ သိသိသာသာကို တင်းလာပြီး အမြှောင်းလိုက် ထောင်တက်တာပါ။ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားတဲ့အခါ၊ စိတ်အရမ်းတိုတဲ့အခါ၊ အရမ်းရယ်တဲ့အခါ၊ အရမ်းချမ်းလို့ သွားတွေစိပြီး ကြိတ်ထားတဲ့အခါတွေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၄၊ ၅ နှစ် လောက်တော့ ရှိပါပြီ။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်နဲ့ ဖိကြည့်ရင်၊ နည်းနည်း နာပါတယ်။ ဘီးအသွားတွေနဲ့ ထိရင်လည်း ဦးရေပြားတွေ နည်းနည်းနာပါတယ်။ အန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်သလား၊ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်နိုင်သလား။ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်တာမျိုး၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဧပြီ ၁၆ နေ့က ဘယ်ဘက် နားထင်အကြော နေရာမှာ ၁ စင်တီမီတာ မရှိတရှိလောက် စိမ်းနေပြီး သိသိသာသာ ချိုင့်ဝင်နေတာ သတိထားလိုက်မိတာ။ ဘေးဘက် ၁ စင်တီခွဲ အကွာလောက်မှာ ၁ စင်တီ အချင်းလောက်ရှိတဲ့ အဖု ပါးပါးလေး ပေါ်လာပါတယ်။ ဖိရင် နည်းနည်း နာပါတယ်။ အဖုလေးက တဖြည်းဖြည်း သေးလာပြီး ဧပြီ ၂၂ မှာတော့ ကုလားပဲစေ့ သေးသေး အရွယ်လောက် ကျန်သေးတယ်။ စိတ်ခံစားလွယ်တယ်၊ Sensitive ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တိုင်း ရုပ်ရှင်ထဲက လန့်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာ ကြုံတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေထက်ပိုပြီး လန့်မိ၊ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ အချို့ Drama ကားတွေမှာ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်တွေ ပါလာရင် မျက်ရည်တောင်မဆည်နိုင်ဘူး။ ကြာရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်သလား။ ဘာတွေ ကြိုတင် ပြင်ဆင်သင့်ပါသလဲ။
ပြောပြတဲ့ သွေးဖိအား ဂဏန်းတွေအရ သွေးတိုး မရှိပါ။ ဝမ်းသာပေတော့ဗျာ။ Life style ကလဲ သိပ်ကောင်းတာမို့ ချီးကျူးရမှာပါဘဲ။
Cerebral infarction ဦးနှောက် သွေးကြော ပိတ်တယ်၊ Cerebral hemorrhage ပေါက်တယ်ဆိုတာ Stroke ခေါ်တယ်။ High blood pressure သွေးတိုး ကနေဖြစ်တာ အများဆုံးပါ။ Atrial fibrillation နှလုံးခုန် မမှန်ရောဂါ၊ Diabetes ဆီးချို ရောဂါ၊ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ High cholesterol (ကိုလက်စထော) များနေသူ၊ Increasing age အသက်ကြီးတာ တွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Alcohol အရက်များသူ၊ Bleeding disorders သွေးယိုတတ်သူ၊ Cocaine (ကိုကိန်း) သုံးသူ နဲ့ Head injury ခေါင်းထိခိုက်မိသူတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့နေရာကို Temple နားထင် ခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှိသမျှ စာရင်းချရရင် အောက်ဆုံးက Sphenoid bone နဲ့ Temporal bone အရိုးတွေ ရှိတယ်။ Auricularis anterior ကြွက်သားရှိတယ်။ Zygomatico-orbitalis artery သွေးလွှတ်ကြော ရှိတယ်။ Anterior Auricular lymph glands သွေးပြန်ရည် (လင့်ဖ်) ကြောရှိတယ်။ Superficial temporal vein သွေးပြန်ကြော ရှိတယ်။ Zygomaticotemporal နဲ့ Zygomaticofacial အာရုံကြောခွဲတွေ ရှိတယ်။ အတိအကျ ပြောရမှာမို့ ခန္ဓာဗေဒ ဝေါဟာရတွေ ထည့်ရေးတာပါ။ မှတ်စရာ မလိုပါ။
ပြောပြတဲ့နေရာမှာ စိုးရိမ်စရာရယ်လို့ ရောဂါဗေဒမှာ မရှိပါ။ မျက်နှာက ကြွက်သားတွေဟာ Facial expression မျက်နှာ အမူအယာ လုပ်တာ အများဆုံး ဖြစ်ကြတယ်။ မေးတဲ့သူ ပြောသလို ဝမ်းနည်း-ဝမ်းသာ၊ ဒေါသ စတာတွေမှာ လိုက်ဖြစ်ကြတယ်။ ပုံမှန်ဖြစ်တာတွေပါ။
• Emotion စိတ်လှုတ်ရှားမှု ဆိုတာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ မတူကြတဲ့ Psycho-physiological စိတ်ပိုင်း နဲ့ ဗီဝကမ္မပိုင်း ရောစပ်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ရှုတ်ထွေးလှတဲ့ ဖေါ်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ အတွင်းထဲက Biochemical ဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ အပြင်ပိုင်းက Environmental ပါတ်ဝန်းကျင်တွေက သက်ရောက်စေတယ်။
• Physiological arousal စိတ်မှာ နိုးကြားလာတာ၊ Expressive behaviors ဖေါ်ပြတတ်တဲ့ အလေ့အထ နဲ့ Conscious experience အတွေ့အကြုံတွေ သက်ဆိုင်တယ်။
• Emotion စိတ်လှုတ်ရှားမှုဆိုတာ Mood စိတ်နေစိတ်ထား၊ Temperament နဂိုစိတ်ရင်း၊ Personality ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး၊ Disposition အလေ့အထ၊ Motivation စေ့ဆော်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။
• Motivations စေ့ဆော်မှုတွေကနေ Behavior အမူအယာ ဖြစ်လာစေဘို့ Energize အားဖြစ်လာစေတယ်။
• Emotions ကနေ Positive အပြုသဘော၊ Negative အနုတ်သဘော ဖြစ်လာစေတယ်။
ဒီလိုရှင်းပြတာက ပုံမှန်ဖြစ်တာမျိုးကို သိစေဘို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ဘို့ လိုမယ်ထင်တာ ပြင်နိုင်ကြတယ်။ အတွေ့အကြုံ၊ လေ့လာမှုတွေအရ ပြောင်းလာမယ်၊ တိုးတက်လာမယ်၊ တချို့မှာ ဆိုးဝါးသွားမယ်။ အထူးကုသသူတွေနဲ့ လိုသူတွေက လိုတယ်။ သာမန်ကာရှန်ကာနဲ့လဲ ကုသမှုလုပ်နိုင်ရင်လဲ လုပ်ကြပါတယ်။
ချုပ်ပြီး အကြံပြုရရင် မေးတဲ့သူမှာ ရုပ်ပိုင်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသူဟာ စိတ်ပိုင်းလဲ (ပုံမှန်) အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်။ အနုတ်သဘောကနေ အပြုသဘော ပိုကဲအောင်လဲ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ပညာတတ်တဦးဟာ ဒီလောက်ဆိုရင် နားကွက်က မီးတောက်မှာပါ။
Q 2: ကျနော် အသက် ၂၉ ပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ညှင်းပေါက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေး လိမ်းလိုက် Fungiderm လိမ်းလိုက်နဲ့ ပျောက်လိုက် ပြန်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတာ ခုထိပါပဲ။ ၄ တန်းနှစ်ကနေ ၆ တန်းလောက်ထိ ခေါင်းမှာ ပွေး ပေါက်ဘူးပါတယ်။ ၇ တန်း လောက်မှ လုံးဝ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဝဏ္ဏသိန္ဒိလိမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညှင်းကတော့ လိမ်းတုန်း ခဏပဲ ပျောက်သွားပြီး နောက်ပြန်ပြန် ထွက်လာပါတယ်။ ခုဆိုရင် ညှင်းပေါက်တာ ၁၅ နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ လုံးဝ အမြစ်ပြတ် ပျောက်အောင် ကုချင်ပါတယ်။ ကျနော် အသန့်လည်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချွေးတော့ စေးပြစ်ပြစ် ထွက်တတ်ပါတယ်။ နွေဘက်ဆိုရင် တစ်နေ့ ကို ရေ နှစ်ခါ သုံးခါ ပုံမှန်ချိုးပါတယ်။ အရမ်းစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဘယ်လို နေထိုင်ရမလဲ။
Fungus မှိုရောဂါများ ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
Q 3: ကျွန်တော့် အသက်က ၃၇ ပါ။ ဒီနေ့ ဝမ်းသွားတာ သွေးပါလို့ ပါ။ နောက် ၁ နာရီလောက်ကြာ တခါသွားတော့ ပုံမှန်ပဲ။ အရင် ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ ပါ။ ဝမ်းကတော့ နည်းနည်းမာတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ သိချင်လို့ ပါ။ ဘာဆေးသောက်ရပါလဲ။
ဖြစ်နိုင်စရာတွေ တခုချင်း ရွေးထုတ်ရမယ်။ ဝမ်းကိုက်တာ၊ ဒါကလဲ ၂ မျိုးရှိတယ်။ အကြိမ်များမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ ရက်မကြာဘူး။ သွေးက နည်းနည်းဘဲ ထွက်မယ်။ အကျိ-အချွဲနဲ့ ရောနေမယ်။ လိပ်ခေါင်း၊ ဝမ်းသွားတာ အကြိမ် ပုံမှန်ဖြစ်မယ်။ ဗိုက်မနာဘူး။ သွေးနီတယ်။ အရည်လိုနေမယ်။ ရောဂါ ၂ မျိုးလုံးအတွက် ရေးထားပါတယ်။
Q 4: ကျွန်မက (့) မှာ နေတာပါ။ ကျွန်မ ဆီးစစ်တံနဲ့ စစ်ပြီးပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကပါ။ ဒါပေမဲ့ တလိုင်းပဲ ပေါ်ပါတယ်။ ဆရာ ပြောသလို မနက်စောစော မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့လည်ပိုင်းလောက်ပါ။ စစ်ခါနီးမှာ ရေတွေ အများကြီး သောက်ထားပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က အရင်လတွေထက်တော့ ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မ ဘယ်လို ဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲရှင်။ ကိုယ်ဝန်ရလွယ်တဲ့ ဆေးရှိရင် ညွှန်းပေးပါလားဆရာ။
• ကလေးရဘို့ ခက်တဲ့သူတွေမှာ အတော်ခက်ပါတယ်။ Infertility (1) ကလေးမရနိုင်သေးခြင်း (၁) Infertility (1) နဲ့ ကလေး မရနိုင်သေးခြင်း (၂) ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ ကြိုးစားပါ။
• အဖြူဆင်းတာအတွက်လဲ ရေးထားပါတယ်။ Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းကိုလဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကိုတော့ စနစ်တကျကုသစေခြင်တယ်။ ခဏခဏဖြစ်တဲ့သူမှာ ကြာရင် ကလေးရမှာကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။
• ရာသီလာလို့ ဖြစ်ရတာတွေကိုလဲ Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ခြင်တာတွေမှာ ရေးထားပါတယ်။
• ဝမ်းဆိုတာ အကျင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးသောက်မှ သွားသူက ဆေးသောက်နေရတတ်တယ်။ ပြင်ယူစေခြင်တယ်။ ဝမ်းလွယ်တဲ့အစာတွေ ရွေးစားပါ။ ရေပိုသောက်ပေးပါ။ ဝမ်းသွားချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
Q 5: ကျနော် အသက်၂၃ နှစ်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ရေကျောက် ပေါက်ပြီးဖျားပါတယ်။ အဖျားကြီးလို့ ဆေးရုံတောင် ရောက်မလို ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကောင်းသွားပါပြီ။ ရေကျောက်က တစ်ကိုယ်လုံးပေါက်ပြီးတော့မှ ကောင်းသွားပါတယ်။ အခု ကျနော့် မျက်နှာမှာ ရေကျောက်ပေါက်ပြီး ဒဏ်ရာ အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အမာရွတ်က မျက်နှာမှာ အပေါက် လိုတောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ အသားပြန်တက်နိုင်ပါမလား။ Hirudoid scar cream ကို ဝယ်လိမ်းနေပါတယ်။ လိမ်းတာ ၄ ရက် ရှိပါပြီ။ လုံးဝ မသိသာသေးပါဖူး။ တစ်ခြား ဆေးနည်းများရှိရင် ညွန်ကြားပေးပါဦး။
Hirudoid Cream လိမ်းဆေးက အမာရွတ်တိုင်းအတွက် ဟုတ်ပုံမရပါ။ သွေးပြန်ကြောတွေ ဖေါင်းတာ၊ ရောင်တာအတွက် အဓိက ဖြစ်တယ်။ သူ့ဆေးညွှန်းအလိုအရ သွေးခြည်ဥလို ဖြစ်တာမျိုး ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ပွန်းပဲတာ၊ ရောင်တာ၊ သွေးပြန်ကြောတွေ ရောင်တာ၊ ရောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို တားဆီးတယ်၊ အနာသက်သာစေတယ်၊ အထဲမှာသွေးယိုလို့ဖေါင်းနေတာ၊ ခိုက်မိလို့ သွေးခြည်ဥနေတာ၊ အမာရွတ်ကို ပျော့စေတယ်၊ အမာရွတ်ကို တင်းနေတာသက်သာစေတယ်၊ ဒဏ်ရာကနီနေတာသက်သာစေတယ်၊ အမာရွတ် ထင်နေရစ်မှာသက်သာစေတယ်၊
ရေကျောက်-အမာရွတ်ကို ဘာမှ မလိမ်းတာ ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ တရက်ထက် တရက် ပိုကောင်းလာမှာပါ။ ဗီတာမင် စီ နဲ့ အေ က အထောက်အကူ ရပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာသန့်ရှင်းရေး ပိုလုပ်ပေးပါ။ အစာအဟာရ မျှတ လုံလောက်အောင်လဲ စားသောက်ပေးပါ။
Q 6: မိန်းကလေးက အခုအသက်က ၂၂ နှစ်။ အိမ်ထောင် မရှိသေးပါဘူး။ အသက် ၁၄ နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ရာသီ စပြီးလာပါတယ်။ တစ်ခါလာရင် ၃-၄ ရက်လောက် ကြာပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ ရောဂါတစ်ခု စဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီလာခါနီးနဲ့ လာနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုက်ခဲလာပါတယ်။ ရင်သားတွေ တင်းပြီးတော့ နာလာပါတယ်။ ခါးလဲကိုက်ပါတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းညာ ကိုက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ဆီးစပ်က မခံနိုင်လောက်အောင်ကို နာကျင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်နဲ့ မစားချင် မသောက်ချင် လောက်အောင်ကို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဆိုရင် စိတ်အားငယ်နေတတ်သလို အရာရာကို အဆိုးဘက်က မြင်နေတတ်ပါတယ်။ ရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာ အနံ့တော့ မရှိပါဘူး အခုနောက်ပိုင်းကိုက်တာ ခဲတာတွေ များလာရင် သွေးခဲတွေ ပါတတ်ပါတယ်။ အရောင်ကတော့ ညိုပုတ်ပုတ် အရောင်ရှိတတ်ပါတယ်။ အဖြူလာတဲ့ ရက်ကတော့ မမှန်ပါဘူး။ ကိုက်တဲ့ခဲတဲ့ အချိန်တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် Decolgen ဆေးကို တစ်ခါတစ်လေ သောက်ပါတယ်။ နောက် ၁ နှစ် လောက်နေရင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာပါ။ ရောဂါကြောင့် ကလေးမရနိုင်မှာကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။
• Decolgen ဆေးထဲမှာ (Phenylephrine HCl 10 mg နဲ့ Paracetamol 500 mg) ပါတယ်။ နှာရည်ယိုတာ၊ ကိုယ်ပူတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ မအီမသာဖြစ်တာ အရိုး-အဆစ်နာတာတွေအတွက်သုံးရတယ်။
• အဖြူဆင်းတာလဲ ရောဂါမဖြစ်ဘို့များပါတယ်။ ဆေးမလိုလောက် သေးပါ။
(့) မှာ နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်သား အသက် ၁၃ နှစ်ရှိပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ပန်းတံက သေးပြီး တိုနေတယ်။ ယခင်ကလေးအသက် ၁၁ နှစ် ကလေးတံဆာ ကပုံမှန်အတိုင်းအကောင်းပါ။ ယခုနှစ်ထဲမှာ ၀လာပါတယ်။ မနှစ်က ကလေး အရပ်အနည်းငယ်ပုလို APPETON အရပ်ရှည်ဆေး(၃)ကဒ်သောက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကလေးရဲ့ ပန်းတံဆာက သေးပြီး မာကျောခြင်းမရှိဘဲ၊ ပန်းသေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပန်းတံဆာ၏ အရင်းဘေးတဖက်ဆီတွင် အကျိတ်ကဲ့သို့ ရှိနေပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ပြကြည်ရာ ခွဲစိတ်ကုသရမည်ဟု ပြောပါသည်။ မခွဲမစိတ်ရဘဲ ကုသရမည်ကို လမ်းညွန်ပေးပါရန်။
APPETON ထဲမှာ တကယ် ဘာပါသလဲ ကျွန်တော် အတိအကျ မသိပါ၊ အင်တာနက်မှာ ရေးတာကတော့ ဗီတာမင်တွေ ပါတယ်။ ဟော်မုန်း ပါ-မပါ သေခြာချင်ပါတယ်။ ရေးထားတာထဲက ပန်းဘေးမှာ အကျိတ်ကဲ့သို့ စေ့ဆိုတာ အစေ့ (အစိ) ကို ပြောတာလား။ လူဝလာရင် အမြင်အရသေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်။ ဟော်မုန်း စစ်တာ ကောင်းပါတယ်။
ဒီစာမပြန်ခင် ထပ်ရတဲ့ အီးမေးလ် ထဲမှာ ပိုသိလာရတာအရဆိုရင် Undescended testes ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ကျား-အစိက သူရှိရမဲ့ Scrotum ကပ်ပဲ့အိတ်ထဲအထိ ကျမလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆို ခွဲရမှာပါ။
30 Apr 11, 02:42
စိတ်တွေ အရမ်း သောကတွေ မယုံကြည်တော့တာတွေ သက်သာချင်ပါတယ်။ ဆေးရှိနိုင်မာလား ဆရာ။
စိတ်မှာဖြစ်တာ ကုလို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ လက်လှမ်းမီရင် ပြပါ။ ဆေးနဲ့ကုတာရော အထူးနည်းနဲ့ ကုတာပါ လုပ်ရတတ်လို့ပါ။ ရောဂါအမည်လဲ ခွဲရသေးလို့ပါ။ သေခြာကုရင် ကောင်းသွားပါတယ်။
30 Apr 11, 09:39
ကျတော့် အသက်က(၂၂) ပါ။ အသားအရည် ခမ်းခြောက်ပြီး ပတ်ကြားအပ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အစကတော့ အသားပတ် တယ်လို့ ထင်တာပါ။ အသားပတ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဆောင်းတွင်းလောက်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ အခု ဖြစ်နေတာက တစ်နှစ်လုံးဖြစ်နေတော့ ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ အသားပါတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ ဘော်ဒီ လိုးရှင်းတွေလဲ လိမ်းတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အရေပြားအတွက် အာဟာရလိုနေလိမ့်မယ်။ ဗီတာမင် အေ နဲ့ စီ သောက်ပေးပါ။ ဆီကိုလဲ အသင့်အတင့်စားပါ။ ရေနဲ့ မကြာမကြာ ထိတွေ့ပေးပါ။ ဆေးအဆန်းတွေ မလိမ်းပါနဲ့။ အလှဆီအစစ် ကောင်းပါတယ်။